Meelo Farxad Leh Oo Lagu Booqdo Safarkaaga Is-Baadhista | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Meelo Farxad Leh Oo Lagu Booqdo Safarkaaga Is-Baadhista
Qorsheynta safar keli ah waxay noqon kartaa mid mashquul badan xitaa socotada xilliyeed, gaar ahaan marka ay timaado xulashada goobta saxda ah ee la booqanayo iyo howlaha saxda ah ee laga qeyb qaadanayo inta ay halkaas joogaan. Laakiin ugu muhiimsan, maxaa yeelay waxaad dooneysaa inaad sida ugu fiican uga dhigato is-helid.
Kali noqoshada wadada waxay kuu ogolaaneysaa inaad booqato meeshii aad rabto waqti kasta oo aad rabto, adigoon u hogaansamin jadwalka qof kale. Sidoo kale, waxaad iskood iskudajin kartaa naftaada adoo ka mid ah shisheeyaha guud, taas oo sare u qaadeysa kalsoonidaada, iyo dabcan, is-koriin.
Taas ayaa la yiri, ma leedahay meel aad maanka ku hayso oo ah safarkaaga is-daahfurka? Maqaalkani wuxuu iftiiminayaa 7 meelaha ugu xiisaha badan ee lagu booqdo kali.
1. Goobaha Lagu Booqdo Safarkaaga Is-Baadhista: Australia
Australia waa meesha lagu riyoodo inta badan quusayaasha sababtoo ah fursadaha quusidda aan dhammaadka lahayn labadaba hiwaayadda iyo khibradaha kala duwan. Iyo xitaa haddii aadan diyaar u ahayn inaad quusato, waxaad wakhti fiican kuheli doontaa inaad ogaato khasnadaha badan ee qarsoon ee dalku bixin karo. Australia sidoo kale waxay hoy u tahay kuwa ugu dabar go'ay ama noocyada xoolaha ee halista ku jira, markaa waxaad heli doontaa fursadda naadir ah ee aad kula macaamili karto fossils-ka milyan-jirka ah ee u dhow.
Laakiin midkoodna xaqiiqooyinka la sheegay ma aha tan ugu weynina maxaan Australia ugu qiimeynay inay noqoto meesha ugu sarreysa ee socdaalka keli keli ah. Sababaha ugu muhiimsan waa nabad waarta dalka, lagu kalsoonaan karo gaadiidka dadweynaha, iyo ikhtiyaarrada hoy raqiis ah. Aad ayaad uga badbaadi doontaa Australia.
Dhaqanka halkan ka jira waa mid hodan ah cuntaduna waa macaan tahay, markaa waxaad heli doontaa tanno raashin ah iyo waxyaabo laxiriira dhaqanka si aad u sahamiso oo aad wax uga barato dadka deegaanka haddiiba aad heli doonto waqti aad ku dhaafto. Hoyga iyo gaadiidka waa kuwo aad u qiimo jaban halkan, maaha in la sheego sida loo heli karo Bangkok wuxuu ka socdaa dhammaan dacallada adduunka. Hadana maskaxdaadu walwalsantahay ama dhibsantahay, waxaad had iyo jeer ka soo bixi kartaa macbudka ama xarunta fikirka oo aad ka fikiri kartaa.
Antwerp ilaa Brussels Tareen
Amsterdam ilaa Brussels Tareen Tareen ah
Paris ilaa Brussels Tareen
3. Goobaha Lagu Booqdo Safarkaaga Is-Baadhista: England
Dhowr sano ka dib, London waxay ahayd magaalada adduunka ugu badan ee ay soo booqdaan kalidaa dalxiisayaasha. Taasi kaligeed waa inay kuu sheegtaa inay meeshani tahay meel aamin ah oo la joogo marka aanad shirkad lahayn. Qasriga Buckingham hadda waa soo jiidashada ugu weyn ee socdaalayaasha kelida ah, laakiin maahan kan kaliya ee London. Haddii aad rabto inaad ku aragto meelaha ugu soo jiidashada badan waqti kooban, kaliya ku biir London safar socod bilaash ah markaad booqato magaalada marka xigta.
Miyaad ku raaxeysaneysaa inaad kaligaa waddo masaafo dheer? Dad badan oo safarro keligood ah ayaa New Zealand ugu jecel fursadaha wadista way u ogolaataa. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa inaad kireysato xero ama gaari caadi ah oo aad aado meesha waddooyinka ay ku geynayaan. Tani waa a dalka u qurux badan si ay u sahamiyaan. Dadka maxalliga ah sidoo kale aad ayey u soo dhoweynayaan waxna u tarayaan markasta oo aad gargaar rabto.
5. Goobaha Lagu Booqdo Safarkaaga Is-Baadhista: Peru
Ku dhowaad meel kasta oo cusub oo booqashadaadu gaar u tahay sababo gaar ah awgood, laakiin Peru waxay ka mid tahay waddamada sida fudud u taagan. Meeshani waxay dad badan kaga yaabisay quruxdeeda dabiiciga ah iyo kaydkeeda, in dadku aysan si fudud ku filnaan karin. Its taariikhda hodanka ah, buuraha, iyo dhaqanka soo jireenka ah, kuwaas oo xiiso u leh booqde kasta. Sayidka, in ay la kulmaan dhamaan hantideeda qaran, qaado dalxiis Peru ah, iskuna bartaan dalka.
Mareykanka waa kala duwan yahay, sidaa darteed waligaa ma dareemi doontid inaad meesha ka maqantahay meel kastoo aad ka timaadaba. Waddanku sidoo kale waa mid aad u ballaadhan wuxuuna leeyahay wax kasta oo aad u baahan tahay inay ahaato buuro, beeraha, xayawaanka duurjoogta ah, ama xeebaha. Marka laga hadlayo xeebaha, waa inaad booqataa Florida marka xigta ee aad joogtid USA oo aad ku dabaalato bacaadka cad. Intaas waxaa sii dheer, Disney waxaa laga yaabaa inay noqoto meesha ugu habboon ee safarkaaga korriinkaaga ah maxaa yeelay waxay dib kuugu celin doontaa inaad dib u xusuusato carruurnimadaadii, iyo nostalgia yar oo qadhaadh waligood qofna ma yeelin. Iyo haddii waxa aad u baahan tahay ay tahay xoogaa waqti deggan oo keligaa ah, waxaad had iyo jeer joogi kartaa a kirada fasaxa ka fog dadka badan.
7. Goobaha Lagu Booqdo Safarkaaga Is-Baadhista: Japan
Japan waxay ka fogtahay wadamada kale xaga tikniyoolajiyadda. Hadaad tahay mustaqbal tignoolaji ama maalgaliye, sahaminta fursadaha ganacsi ee magaaladani leedahay hubaal way kugu farxin doontaa. Waddanku sidoo kale wuxuu hoy u yahay macbudyo qurxoon, hudheelo heer sare ah, iyo maqaayado, iyo sidoo kale Aasiya khasnadaha dabiiciga ah ee ugu qarsoon. Waa maxay more, nidaamyada gaadiidka wax ku oolka ah halkan waxay kaa dhigi doonaan safarkaaga kaligaa mid xiiso leh oo aan dhib lahayn. Hadaad tahay muusig jecel, waad soo qaadan kartaa laptop-kaaga iyo kanaga muusikada sameynta si ay dhiirrigelintu kuugu garaacdo oo laga yaabo inay soo saarto xoogaa dhawaaqyo qurxoon oo astaan ​​u ah safaradaada keli ah.
Waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo oo wax laga barto Malaysia, laakiin xaqiiqda ugu xiisaha badan ee ku saabsan waddankan Koonfur-bari Aasiya ayaa ah in boqolkiiba inta badan ee dadku ku hadlaan Ingiriis. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad si dhib yar u waayi doonto jidkaaga markaad keligaa halkan u safreyso. Dalku wuxuu leeyahay xeebo, buuraha, dhibco quusid, iyo wax kasta oo aad ugu baahan lahayd inaad ku nasato oo aad naftaada ugu raaxaysato.
Boorsooyinka dhabarka iyo kalid safarka ayaa caan noqda maalinba maalinta ka dambeysa sababtoo ah dabacsanaanta ay soo rogaan. Waxaad sameyneysaa wax sax ah. Kaliya xusuusnow inaad leedahay miisaaniyad kugu filan hoygaaga, cuntada, iyo baahiyaha gaadiidka maxaa yeelay waa inaad noqotaa mid isku kalsoon haddii aad ku raaxeysanaysid safarkaaga is-ogaanshaha.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno qorsheynta Meelahaaga Xiisaha Leh Si Aad Ugu Booqato Safarkaaga Is-Baadhista tareenka.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "baloogyada xiisaha leh ee lagu booqdo safarkaaga is-baarista" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Ffun-places-visit-self-discovery-trip%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
discovery FunPlaces SelfDiscoveryTrip Safarista